Iyo nyowani vhezheni yeShotcut 18.11 yakatoburitswa neyakagadziridzwa nyowani uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura paive nekuburitswa kweiyo vhidhiyo mupepeti Shotcut, iyo inosvika mune yayo nyowani vhezheni 18.11 yakagadzirirwa neMLT dhizaini uye inoshandisa iyi sisitimu yekuronga vhidhiyo yekugadzirisa.
Shotcut implements rutsigiro rwevhidhiyo uye odhiyo mafomati kuburikidza neFFmpeg. Iwe unogona kushandisa plugins nekumisikidza kwevhidhiyo uye odhiyo mhedzisiro inoenderana neFrei0r neLADSPA.
Pamaitiro eShotcut anomira pachena mukana we multitrack kugadzirisa pamwe nekuumbwa kweiyo vhidhiyo yezvimedu mune akasiyana mafomati mafomati, pasina kukosha kwekumbopinza kana kuwadhindisa.
1 Nezve iyo nyowani vhezheni yeShotcut 18.11
2 Maitiro ekuisa Shotcut 18.11 paLinux?
Nezve iyo nyowani vhezheni yeShotcut 18.11
Mukuburitswa kutsva kwechishandiso akawedzera skrini ine sarudzo dzekugadzira chirongwa chitsva uye chinyorwa chemapurojekiti achangobva kuvhurwa.
Kune avo vedu vashandisi veLinux uye chishandiso ichi, vanogadzira waita kugona kushandisa VA-API ye Hardware inokasira vhidhiyo encoding.
Zvakare kune iko kunyorera imwe nzira yakawedzerwa yakawedzerwa kune chikamu chekutumira kunze, sarudzo yekugonesa Hardware yakakurumidza vhidhiyo encoding uye preselection yeUt Vhidhiyo.
Ipo kune avo vari kushandisa iyi application paMacOS, rutsigiro rweVideoToolbox API uye SDK yakawedzerwa uye kuunzwa kwegungano rakasainwa nesiginicha yedhijitari kwakaitwa.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveiyi vhezheni nyowani rutsigiro rwekusimudzira gumi-pixel uye makumi maviri-pixel grids panguva yekutamba uye furuji yekubvisa smudge kubvisa smudges.
Kune rimwe divi, maererano nemamenu ekushandisa, mutsva menyu «Wona> Makuriro> Vhidhiyo waveform» yakawedzerwa.
Nezve mafirita ekushandisa tinogona kuona kuti firita yekutenderera uye kuyera, chiyero chakanyanya chakawedzerwa kusvika 500% uye akawedzera firita inoratidza timer mune fomu "MM: SS.SS" uye odhiyo wave wave firita.
Mune iyo Rondedzero yeKuratidziro dialog, iko kugona kushandura iwo ruvara rwegumbo vhiri kunowedzerwa.
Chekupedzisira, chinhu chitsva chinogona kusimbiswa ndiko kuwedzerwa kwerutsigiro kuratidza vhidhiyo munzvimbo yakatenderera ine 1080p mhando (30 ne60 FPS).
Maitiro ekuisa Shotcut 18.11 paLinux?
Muchiitiko cheavo vari vashandisi veUbuntu uye zvigadzirwa zvaro, vanogona kuisa ichi chishandiso nekuwedzera iyo yekushandisa repository kune yavo system. Kuti tiite izvi tinofanirwa kuvhura terminal neCtrl + Alt + T uye mairi tichaita zvinotevera.
Kutanga isu tiri kuzowedzera iyo repository ne:
Pakupedzisira tinoenderera mberi nekuisa iko kunyorera ne:
Kune mamwe ese ekuparadzirwa kweLinux isu tine nzira nhatu dzekuwana chirongwa ichi.
Yokutanga ndeye kushandisa Flatpak, saka ivo vanofanirwa kuve nerutsigiro rwemhando iyi yekushandisa pane yako system.
Ipapo ivo vanofanirwa kuvhura terminal uye mairi nyora unotevera kuraira:
Imwe nzira yatinofanira kuwana iyi yekugadzirisa ndeyekuodha pasi application mune yayo AppImage fomati, iyo inotipa iyo nzvimbo yekushandisa iyi application pasina kuisa kana kuwedzera zvinhu kuhurongwa.
Iyo yekupedzisira nzira iri nerubatsiro rweiyo Snap mapakeji uye kumisikidza iyo application isu tinofanirwa kuteedzera inotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeShotcut 18.11 yakatoburitswa neyakagadziridzwa nyowani uye nezvimwe